MI Account ဖွင့်နည်း ~
MI Account ဖွင့်နည်း
10:46 PM by Emc Prince No comments
#‎Mi‬ Account တစ်ခုကို ဘယ်လိုပြုလုပ်ကြမလဲ ?
Mi Account တစ်ခုကို ပြုလုပ်တော့မယ် ဆိုရင် ဖုန်းရဲ့ Mi Account app ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Setting - Mi Account ကပဲဖြစ်ဖြစ် Create Mi Account ကနေ အလွယ်တကူပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ နည်း ၂ မျိုးဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပြီး Sim card ဖြင့် (သို့) Email/Gmail ဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်မှာပါ။ Sim card နဲ့ ပြုလုပ်တာကတော့ များသောအားဖြင့် ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး တခါတလေ Telecom Operator ပေါ်မှုတည်ပြီးလည်း ကြာနိုင်ပါတယ်။
Gmail ဖြင့် ဖွင့်မယ်ဆိုရင် အောက်ပါ Link ကနေ ပြုလုပ်တာက ပိုမိုမြန်ဆန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန် Account တစ်ခု ဖွင့်တဲ့အတိုင်း လိုအပ်တဲ့ Field တွေကို ဖြည့်သွားပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Gmail Inbox ထဲကို ပို့လာတဲ့ Verification code ကို ဖြည့်လိုက်တာနဲ့ Mi Account ဖွင့်လှစ်ခြင်း ပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။
‪#‎မှတ်ချက်‬ ။ Mi Account တစ်ခုအသုံးပြုနေပြီဆိုရင် ထို Account ကို Device 10 ခုအထိ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဖုန်းတစ်လုံး Account တစ်ခု ထားစရာ မလိုအပ်ပါဘူး။ ထပ်မံ သတိထားစေချင်တာကတော့ Mi Account ရဲ့ ID No. နဲ့ Password ကိုသေချာမှတ်ထားပေးဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
ကဲကျုပ်လဲခပ်တည်တည်နဲ့သူများဟာ ကူးထားတာဗျာ ဟီး
Gapps For MIUI 9
MIUI9တင်ပြီးလို့ Google Play Store က Error တက်နေရင် ဒီ App(google Installer Version 2) လေး Install လုပ်ပြီး သုံးလိုက်ပါ အဆင်ပြေသွားပါလ...
Huawei Honor H30-U10 Flashtool Firmware
ဆရာတို့ H30-U10 လေး Firmware ကျနေပြီး power ဖွင့်ရင် vibrate တုန်တာတွေ Flashtool နဲ့တင်ရင် % မှာရပ်ရပ်နေတာတွေအတွက် ဒီ Firmware ၊ ဒီ Fla...
Download လုပ်မရတဲ့သူတွေအတွက် Link ပြန်ပြင်ပေးထားပါတယ် ဒီ Tool မှာ ဘာတွေပါလဲ ဆိုတော့ ...။ 1 . Xiaomi Qualcomm devices တွေ အတွက် Account...